Umgangatho ophezulu weHDPE wokuKhanya okuLuhlaza okwesibhakabhaka kunye noMvelisi | Erbo
HDPE Small Light Blue edadayo ...
IHDPE encinci yeCy Blue Blue Floating Cy ...
IHDPE enkulu e-orenji edadayo ...
IHDPE iBlue Blue Floating Cy ...
IHDPE Esincinci Isilinda Esidadayo Esilihlaza
Ukucaciswa okuphambili / amanqaku akhethekileyo
Igama: Isilinda seHDPE esincinci sokuKhanya okuLuhlaza.
Ubukhulu: 46cm * 22cm * 23cm.
Umbala: Luhlaza okwesibhakabhaka.
Isixhobo: IPLPE yeHDPE.
Inkqubo Manufacturing: Blow Ukubumbela.
Iimpawu: Sebenzisa izinto zeHDPE ekrwada, ubungqina be-ultraviolet, ixesha elide lokuphila, kulula ukuyifaka, ixabiso eliphantsi. Ukubonakala kombala ohlaza okwesibhakabhaka kunokusetyenziswa njengomqondiso wesilumkiso.
Ulwaneliseko lwe-shopper yeyona nto sigxile kuyo. Sigcina inqanaba elihambelanayo lobuchwephesha, umgangatho, ukuthembeka kunye nokulungiswa kweXabiso eliKhethekileyo le-buoy edadayo, Inkampani yethu igcina ishishini elikhuselekileyo elixutywe yinyaniso kunye nokunyaniseka ukugcina ubudlelwane bexesha elide kunye nabathengi bethu.
I-buoy edadayo, Inkampani yethu ngumthengisi wamazwe aphesheya kolu hlobo lokuthengisa. Sikunika ukhetho olumangalisayo lwezinto ezikumgangatho ophezulu. Injongo yethu kukukuvuyela ngokuqokelela kwethu okwahlukileyo kweemveliso ezinengqondo ngelixa sinika ixabiso kunye nenkonzo ebalaseleyo. Umsebenzi wethu ulula: Ukuhambisa ezona mveliso zilungileyo kunye nezisombululo kunye nenkonzo kubathengi bethu ngamaxabiso asezantsi.
Umgangatho ophezulu uza ku-1; uncedo luphambili; lweshishini yintsebenziswano ”yifilosofi yeshishini lethu elijongwa rhoqo kwaye lilandelwa lishishini lethu ngexabiso eliphantsi le-buoy edadayo, Ukufumana okungakumbi malunga nento esinokukwenza yona ngokobuqu, sitsalele umnxeba nanini na. Sijonge ukuseka intsebenzo yenkampani elungileyo kunye nexesha elide kunye nawe.
Ixabiso eliphantsi le-buoy edadayo, iinjineli ze-R & D ezifanelekileyo zinokubakho kwinkonzo yakho yokubonisana kwaye siya kuzama konke okusemandleni ethu ukufezekisa iimfuno zakho. Khumbula ukuba ukhululeke ukunxibelelana nathi xa unemibuzo. Uyakwazi ukusithumela ii-imeyile okanye usitsalele umnxeba ngeshishini elincinci. Kananjalo uyakwazi ukuza kwishishini lethu ngokwakho ukuze uqhubeke usazi. Kwaye ngokuqinisekileyo siya kukubonelela ngeyona kowuteshini ilungileyo kunye nasemva kwentengiso yenkonzo. Sikulungele ukwakha ubudlelwane obuzinzileyo nobobuhlobo nabarhwebi bethu. Ukufezekisa impumelelo yethu sobabini, siya kwenza konke okusemandleni ethu ukwakha intsebenziswano kunye nomsebenzi wokunxibelelana ocacileyo namaqabane ethu. Ngaphezulu kwako konke, silapha ukwamkela imibuzo yakho ngazo naziphi na izinto kunye nenkonzo yethu.
Egqithileyo Isilinda esincinci se-HDPE esincinci
Okulandelayo: IHDPE Ibhakethi lokulwa nokungqubana
IHDPE Isilinda esikhulu esidada emanzini
Isilinda esincinci se-HDPE esincinci
IHDPE Isilinda Esikhulu Esidadayo Esilihlaza